किन असफल हुन्छन् स्टार्ट अप कम्पनी ? | गृहपृष्ठ
सोमवार, बैशाख १०, २०७५
Home रोजगारी किन असफल हुन्छन् स्टार्ट अप कम्पनी ?
रोजगारी 111 views
किन असफल हुन्छन् स्टार्ट अप कम्पनी ?
क्राउड फण्डिङ, इनिशियल क्वाइन अफरिङलगायत माध्यममार्फत रकम जोहो गर्न सहज बनेपछि विगत केही वर्षमा नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर नै धमाधम स्टार्ट अप खुलिरहेका छन् । तर, धेरैजसो स्टार्ट अप असफल हुन्छन् । सीबी इन्साइट्सले असफल भएका १ सय १ स्टार्ट अप कम्पनीहरूको ‘पोष्ट मोर्टेम’ गरेर यस्ता कारणहरूको सूची नै तयार पारेको छ । अधिकांश कम्पनी असफल हुनुका पछाडि २० मुख्य कारण पाइएको छ । यी कारणलाई तलको रेखा चित्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
फेलियर टु पिभोट (व्यवसायको चुरो नभएर)
छानिएको उत्पादन नै गलत हुन सक्छ, कर्मचारी भर्तीमा गल्ती हुन सक्छ वा गलत निर्णय पनि हुन सक्छ । त्यस्ता गल्ती तत्कालै सुधार नगरेकाले ७ प्रतिशत उदाहरणमा असफलता निम्तिएको पाइयो । गलत अवधारणासँग टाँसिइरहँदा वा गलत हो भन्ने थाहा पाएपछि पनि त्यसैको पछि लागिरहँदा स्रोत साधन र पैसा नाश हुन्छ । मरिहत्ते गरेर काम गर्दा समेत प्रगति नभएको देख्दा कर्मचारी पनि निराश हुन्छन् ।
कार्यालय र व्यक्तिगत जीवनबीच तालमेल ल्याउन स्टार्ट अप संस्थापकलाई हम्मेहम्मे हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूमा चाँडै थकान देखिने सम्भावना धेरै हुन्छ । असफल स्टार्ट अप कम्पनीहरूमध्ये ८ प्रतिशतमा यही कारण पाइएको छ । थकानको अवस्था आउन नदिने वा यसलाई जित्ने नै हो भने अनावश्यक ठाउँमा धेरै प्रयास गर्नु हुँदैन र अब केही हुँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि आफ्नो प्रयास अन्यत्र डोहोर्‍याउने क्षमता हुनुपर्दछ । यसका लागि जिम्मेवारी बाँटफाँट गर्न सक्ने सबल, विविध क्षमता भएको र विशेषज्ञतायुक्त समूह बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
नेटवर्कको उपयुक्त प्रयोग नगर्नु
नेटवर्कको अभाव भयो वा लगानीकर्ताहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो भएन भनेर स्टार्ट अप उद्यमीहरूले गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ । स्टार्ट अपसँग भएको नेटवर्कको यथोचित उपयोग नहुनु पनि असफलताको एक कारण हो । यो समस्या आउन नदिन लगानीकर्ताहरूलाई शुरूदेखि नै पूर्ण रूपमा संलग्न गराउनुपर्दछ ।
केही स्टार्ट अप कम्पनीहरू साधारण अवधारणाबाट शुरू हुन्छन् । तर, कहिलेकाहिँ यिनीहरू कानूनी जटीलताको चपेटामा आउन सक्छन् र कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । केही म्युजिक स्टार्ट अप कम्पनीहरू सङ्गीत रेकर्ड गर्दा लाग्ने उच्च लागत र रोयल्टीसँग सम्बन्धित समस्यालगायत कानूनी टाउको दुखाइकै कारण बन्द भएका विश्लेषणले देखाएको छ ।
लगानीकर्ताको रुचि नहुनु
केही स्टार्ट अप कम्पनी चलाउन आवश्यक रकम नहुँदा बन्द भएको पाइयो । संस्थापकहरूले शुरुआती चरण वा समग्र प्रक्रियामा रुचि नदिँदा यस्तो स्थिति आएको केही स्टार्ट अप संस्थापकहरूको भनाइ छ ।
भौगोलिक विस्तार गर्दा असफलता
स्टार्ट अपको व्यवसाय रहने ठाउँको महत्त्वका एकभन्दा बढी पक्षहरू छन् । प्रथमतः स्टार्ट अपको व्यावसायिक अवधारणासँग मेल खाने व्यावसायिक केन्द्र हुनुपर्छ । कहिलेकाहिँ कम्पनी एक ठाउँमा हुने र त्यसका टिम सदस्यहरूले अन्यत्रै बसेर काम गर्नुपर्दा पनि कम्पनी असफल भएका छन् ।
शुरूमा सुन्दा अधिकांश अवधारणा राम्रो लाग्छ । कतिपय मानिसहरू अवधारणा सुनेरै उत्साहित हुन्छन् । तर, अवधारण जत्तिसुकै राम्रो किन नहोस् त्यसप्रति लगावको अभाव र सो क्षेत्रबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा ९ प्रतिशत स्टार्ट अप असफल बनेको यो पोष्ट मोर्टेमले देखाएको छ ।
व्यवसायको चुरो बिग्रिने
इन्ष्टाग्रामको चुरो (पिभोट) थियो बर्बन र गू्रपनको ‘द प्वाइण्ट’ थियो । यसले उनीहरूलाई सफलता दिलायो । पिभोटिङका लागि मात्र पिभोटिङ गर्नु बेक्कार छ । पिभोटिङ गर्दा सबै कुराको हिसाब राख्नुपर्दछ । व्यावसायिक मोडलमा परिवर्तन गरेर, परिकल्पनाहरूको परीक्षण गरेर र यसबाट आउने नतीजा मापन गरेर मात्र पिभोट तय गर्नुपर्छ ।
समूहभित्रै र लगानीकर्तासँग मतभेद
सहसंस्थापकबीचको कलह कम्पनीका लागि घातक हुन्छ । लगानीकर्तासँग कलह बढ्दै गयो भने पनि त्यस्तै हुन्छ ।
एकैचोटि धेरै कुरामा ध्यान दिँदा जुनमा बढी दिनुपर्ने हो त्यता चाहिए जति ध्यान पुग्दैन । मुख्य व्यवसायसँग असम्बद्ध परियोजना, व्यक्तिगत समस्या र÷वा ध्यानको कमीलगायत समस्याले ध्यान भङ्ग हुँदा १३ प्रतिशत स्टार्ट अप असफल भएको पोष्ट मोर्टेमले देखाएको छ ।
गलत समयमा ल्याइएको उत्पादन
उपयुक्त समयभन्दा अगावै उत्पादन ल्याइयो भने प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई अनुपयुक्त ठानेर बेवास्ता गर्छन् । अनि शुरूमै नकारात्मक ‘इम्प्रेशन’ परिसकेकाले त्यो उत्पादनलाई पुनः ल्याउँदा सफल हुने सम्भावना पनि क्षीण हुन्छ । उत्पादन निकै ढिला ल्याउँदा पनि बजारमा अरूले वर्चस्व जमाइसकेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा उच्च हुन्छ र वृद्धिको अवसर पाउन गाह्रो हुन्छ ।
ग्राहकलाई बेवास्ता गर्नु, उनीहरूले चाहेको कुरा पूरा गर्न नसक्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु हो । ग्राहकका चाहनालाई बेवास्ता गरेर लगानीकर्ता र सहसंस्थापकहरूले आआफ्ना विचारले कम्पनी चलाउनु निकै घातक हुन्छ । ग्राहकको विचार नै नबुझी एकतर्फी रूपमा सेवा, सुविधा र फिचर ल्याउनु असफलताको मुख्य कारक हो ।
लक्षित दर्शक को हुन् र आफ्ना उत्पादनप्रति तिनीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जान्नु अनि तिनीहरूलाई अन्ततः ग्राहकमा बदल्नु पनि सफल व्यवसायका लागि आवश्यक शीपमध्ये एक हो । तर, कहिलेकाहिँ स्टार्ट अप कम्पनीहरूले उत्पादनको उचित मार्केटिङ नै गर्न जान्दैनन् । उत्पादन राम्ररी तयार गरे पनि केहीले भने यसको प्रवर्द्धन गर्न जान्दैनन् ।
व्यावसायिक मोडलविनाको उत्पादन
हरेक व्यवसाय वा कम्पनीका लागि व्यावसायिक मोडल निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो । यो कुरा असफल स्टार्ट अप कम्पनीका संस्थापकहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । एउटै च्यानलमा मात्र आबद्ध रहने, लगानीकर्ताहरूले थप लगानी गर्न इच्छा नदेखाएपछि आवश्यक रकम जोहो गर्ने तरीका भेट्टाउन नसक्नु र संस्थापकहरूले प्राप्त गरेको रकमकै सदुपयोग गर्न नजान्नु पनि स्टार्ट अप असफल हुनुका कारणहरू हुन् ।
प्रयोगकर्तालाई असहज उत्पादन
प्रयोगकर्ताहरूले के चाहन्छन्, उनीहरूलाई के चाहिएको भन्ने कुरा थाहा नहुँदा वा जानीजानी बेवास्ता गर्दा पनि नचाहेको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो हुने उत्पादनहरू ल्याएर कम्पनी कहिल्यै सफल हुन सक्दैन ।
मूल्य निर्धारण/लागतमा समस्या
स्टार्ट कम्पनीको सफलतामा उत्पादनको मूल्य निर्धारण निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । कहिलेकाहिँ कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको यथोचित मूल्य तोक्न जान्दैनन् । धेरै मूल्य तिर्दा समेत अपेक्षा गरेअनुरूप भएन भने प्रयोगकर्ताले त्यस्ता उत्पादन प्रयोग गर्न मान्दैनन् । असफल भएका स्टार्ट अपहरूको पोष्ट मोर्टेमले के उजागर गरेको छ भने उत्पादनको मूल्य उच्च राख्न अप्ठ्यारो हुने भए पनि लागतको भर्पाइ गर्न कम्पनीहरूले मूल्य धेरै राख्छन्, तर यसरी उपभोक्तालाई टिकाउन सकिँदैन ।
स्टार्ट अप कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धासँग डराउन हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सत्य कुरा चाँहि के हो भने कुनै नयाँ अवधारणाले सफलता पाएको देखेपछि अरूले पनि त्यस्तै अवधारणालाई पछ्याउन थाल्छन् । व्यापार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । यो त्यति ठूलो कुरा होइन । प्रतिस्पर्धाबारे मात्र धेरै सोच्नु राम्रो होइन, तर यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि घातक हुन्छ । १९ प्रतिशत स्टार्ट अप असफलताको कारण प्रतिस्पर्धीले उछिन्नु पनि हो ।
कुनै पनि कम्पनीको सफलताका लागि विभिन्न खाले शीप र दक्षता भएका व्यक्तिहरू सम्मिलित ‘टिम’को निकै महत्त्व छ । असफल स्टार्ट अपका संस्थापकहरूले आफूसँग शुरूदेखि नै प्रमुख प्रविधि अधिकृत भइदिए हुन्थ्यो, कम्पनीमा ‘बिजनेश आस्पेक्ट अफ थिङ्ग्ज’ मन पराउने संस्थापक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो गुनासो गरेको धेरै भेटियो । कतिपय असफल कम्पनीमा भने संस्थापकहरूले अलि बढी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने बताए ।
रुपया र समय भन्ने चिज सीमित हुन्छ । त्यसैले यसको बाँटफाँट पनि विवेकपूर्ण तरीकाले गर्नुपर्छ । पैसा कसरी खर्च गर्नुपर्छ ? भन्ने धेरै जसो सोधिने प्रश्न हो । पोष्ट मोर्टेमअनुसार स्टार्ट अप असफल हुनुको २९ प्रतिशत कारण पैसाको सदुपयोग गर्न नजान्नु हो ।
माग नभएको उत्पादन
भविष्यमा चाहिन्छ भनेर चीनले त्यहाँ कैयौं स्थानमा ठूल्ठूला शहरहरू बसाल्यो । भौतिक पूर्वाधार र भवन निर्माणमा अर्बौं रुपया खर्च गर्‍यो । तर, अहिले ती शहरमा भवन र पूर्वाधारमात्र छन् । त्यहाँ मान्छे भने एउटै भेटिँदैन । माग नै नभएको उत्पादन, सामग्री ल्याउँदा स्थिति कस्तो हुन सक्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो । सीबी इन्साइटका अनुसार ४२ प्रतिशत स्टार्ट अप असफल हुनुको कारण बजारमा मागै नभएको उत्पादन ल्याउनु हो । त्यस्तै, बजारको समस्या समाधान गर्न नसक्दा पनि स्टार्ट अप असफल हुन्छन् ।
(प्रस्तुतिः रमा सुवेदी)
व्यावसायिक सफलताका लागि सूचना प्रविधि
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०७:२६
नेतृत्व क्षमताका ९ परिसूचक
२६ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:५०
व्यवस्थापन ज्ञान : गल्तीबाट सिकेर कार्यकुशलता कसरी सुधार्ने ?
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०७:०९
व्यवस्थापन ज्ञान : सफल उद्यमीले भिन्नै तरीकाले गर्ने ७ काम
१२ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:२८
ट्याक्सीको पनि सिण्डिकेट तोड्छौंः मन्त्री महासेठ
१९ सदस्यीय उद्योगी/व्यवसायीको टोली ब्राजिल प्रस्थान
एनबी बैङ्कको डेपुटी सीईओमा श्रेष्ठ नियुक्त, एजिएममा देवकोटा
कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
घुस लिएको आरोपमा वाणिज्यका सहायक प्रबन्धक अख्तियारको नियन्त्रणमा
गल्तीवस २८ अर्ब यूरो स्थानान्तरण
तस्करी बढ्दा रौतहटमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव
‘रिजर्व बैङ्क अफ इन्डिया’का पूर्व गभर्नर रघुराम राजन
ललितपुर फाइनान्सले ५ करोड ६५ लाख खराब कर्जा उठायो
एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको संस्थापक ५१ प्रतिशत कायम, ६००% हकप्रद परिमार्जन